Chipiri, February 7, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Vatengesi vari kushandisa zviitiko kupfuura nakare kose, uye iko kuitika kuri pachena. Muchokwadi, vatengesi vanoisa tradeshows uye zviitiko senzira yavo yechipiri inoshanda kwazvo mushure mekambani webhusaiti Zviitiko zvinobatsira kuunza mitsva inotungamira, kushandura tarisiro inofarira kune vatengi, uye kutsanangura zvirinani chigadzirwa kana sevhisi mune chaiyo-nguva. Nekudaro, vatengesi vazhinji vanonetseka kuti vasangorekese zviitiko muzviitiko zvakabatanidzwa, asiwo kuti vanzwisise uye vayere maitiro avari kutyaira kutengesa, kuziva chiziviso,
Kunge idiot, ini ndakabatana ne165,000 mamwe magajeti-anoongorora tekinoroji, vashambadzi, vanokanganisa, hucksters, uye vamwe vakabatana paCES 2017 svondo rapfuura. Nguva yangu zhinji ndaipedza kusangana nevanhu. Kana, zvakanyatso kurongeka, muLyfts, Ubers, uye macab anoshinga Vegas traffic kubva kugehena ndichienda kunosangana nevanhu. Asi ini ndakachengetera maawa masere kune chimwe chinhu munhu wese anoda tekinoroji anofanira kuita kanokwana kamwe chete: kudzungaira pasi penzvimbo huru dzemusangano kuCES, iyo